» इन्डियन आर्मीमा भर्ती खुल्यो ! कुन प्रदेशमा कहिले? शुचि सहित हेर्नुहोस इन्डियन आर्मीमा भर्ती खुल्यो ! कुन प्रदेशमा कहिले? शुचि सहित हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
इन्डियन आर्मीमा भर्ती खुल्यो ! कुन प्रदेशमा कहिले? शुचि सहित हेर्नुहोस
admin 1142 Views
इण्डियन आर्मी (गोर्खा सैनिक) मा भर्ना खुलेको छ ।मंगलबार प्रकाशित सुचना अनुसार नेपालका ७७ वटै जिल्लामा भर्ती शिविर तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । न्यनतम शैक्षिक याेग्यता SEE पासले भर्तीकाे लागि आवेदन दिन पाउने सुचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै उमेरकाे हकमा १७ बर्ष ६ महिना पुरा भएको र २१ बर्ष क्रस नभएको भनिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा फागुन २० देखि फागुन २९ सम्म भर्ती छनाैट प्रारम्भिक प्रक्रिया हुने जनाइएको छ । विस्तृत जानकारी तलकाे सुचनामा छ ।
नेपालीहरू सुगौली सन्धिपश्चात् ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेको इतिहास छ। सन् १९४७ मा भारत ब्रिटेनको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच अर्को सम्झौता भई त्यस अनुसार ब्रिटेन र भारतको सेनामा गोर्खा भर्ती हुने गरेको छ। त्यसपछि भारतमा भएका चारवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू ब्रिटिश सेनामा सारिएका थिए। तिनै रेजिमेन्टहरू मिलाएर ब्रिग्रेड अफ गुर्खाज गठन भएको हो।
इतिहासकारहरूका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धका बेला गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या सर्वाधिक अर्थात् एक लाख १२ हजार थियो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा दुई लाख ३० हजार भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू सहभागी भएको बताइन्छ। त्यसपछि भने उनीहरूको सङ्ख्या घट्यो। अहिले भारतीय गोर्खा सैनिक लगभग एक लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।
नेपाली सेनाले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको ‘सैनिक सेवा नियमावली २०७७’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित
नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली (तेस्रो संशोधन), २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सेनाको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (विवृत्तिभरण) सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहित रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयको स्वीकृतीसँगै सो संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । नेपाली सेनाका सकल दर्जाले पेन्सन अवधीबारे लामो समयदेखि गर्दै आएको गुनासो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए । जसले गर्दा नियमावली संशोधन सम्भव भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सेनामा कार्यरत सकल दर्जाहरुले प्रधानसेनापतिको यस कदमलाई खुलेर प्रशंशा गरेका छन् । विशेष गरि तल्लो तहकाहरु, सिपाहीहरुले आफ्नो गुनासो सुनिदिएकोमा सेनापतिमाथि कृतग्य भएको जस्ता खुसीले आल्हादित कमेन्ट गरेका छन् ।नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब नेपाली सेनाका सिपाहीले २०६० वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीले १६ वर्ष पुगेपछि पेन्सन अवधिमा जान पाउनेभएका छन् । पिउठ, अमलदार र हुद्दा १७, जमदार १८ तथा सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्षमा स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्नेछन् । सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको तहको हकमा भने पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष नै कायम हुनेछ ।
बीस वर्ष सेवा नपुग्दै स्वेच्छिक अवकास लिने त्यस्ता सैनिकले निवृत्तिभरणको रकम भने सेवा प्रवेश अर्थात भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा भएको मितिबाट मात्रै पाउनेछन् । सेवाअवधि भने दर्जाअनुरुप अवकास लिएको वर्षकै नै गणना हुनेछ ।
विसं २०६० वैशाख २७ गतेसम्म सिपाहीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्षे सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । लामो समयसम्म पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ सैनिकले बीचमै सेवा छाडेका थिए । माग सम्बोधन नहुँदा अवकासपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै ती सैनिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाडेका हुन् । सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ ।
सोह्र वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आँकडाले देखाएको छ । पेन्सनको अवधि २० वर्ष पुर्याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सकल दर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गी अड्डालाई मुस्किल परेको थियो । संंशोधित नियमावलीमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाबाट बाहिर जान नदिनका लागि विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।